Caqiido kaladuwan | KONGOLISOLO
Dowladaha ama hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa gabi ahaanba iska indho tiraya shuruucda fudud ee xukuma xiriirka caalamiga ah ama xiriirka ka dhexeeya dowladaha ama kuwa udhaxeeya xiriirka caalamiga ah ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: July 19, 2020 03: 31 No Comments
Sinaanta Boqortooyo ee Dowladaha, faragelin la'aanta arrimaha Dowladaha kale; xaqa ay dadku u leeyihiin go’aansiga dhabta ah, taasi waa in la yidhaa xaqa ay u leeyihiin inay doortaan li ...	Akhri wax dheeraad ah
Khaniisnimadu sidii ay u ahayd qiimaha Eurocentrism: khaniisnimada galbeedka wax cusub maahan; muuqaalka ayaa laga yaabaa inuu qaar ka argagaxo, laakiin akhri qoraalka si aad si fiican u fahamto, maxaa yeelay muuqaalkan wuxuu metelaa gidaarka Giriig ee hore fresco
Posted By: KongoLisolowaa: July 17, 2020 05: 56 No Comments
Eurocentrism ama wadaagista qoraaga khaniisnimada ee Afrika iyo diidmada wax kasta oo saynis ah oo loo maro Afrika "Qaniisnimada waa ...	Akhri wax dheeraad ah
Rumaysadku waa nool yahay oo waa firfircoon yahay: iimaanka aan haysan shuqullada waxba ma soo saari karo, marka laga reebo xag-jirnimada indha la '; iimaanka noocan ah lama huraan wuxuu u horseedaa si aan macquul ahayn
Posted By: KongoLisolowaa: July 15, 2020 00: 00 No Comments
Tani maaha iimaankan, kaas oo Hermes Trismegistus, "Saddexda jeer la dhashay, saddexda jeer dhaadheer, saddexda jeer oo daahir ah", wuxuu ka hadlay markii uu yiri geedka saytuunka ee xigmadda leh:	Akhri wax dheeraad ah
Waajibka ah in la xasuusto: kuwa u dooda sheydaanka; kuwa jecel inay difaacaan asturnaanta "wali sirta wali macno ma leedahay?" Asturnaanta waxaa loo fahamsan yahay inay tahay wax qof walba ay waajib tahay inuu qariyo; waa wax ama dabeecad loo maleynaayo in lagu hayo si gaar ah, masayr ama meel kale aan laga gaari karin; mar hadii la kashifo, maahan asturnaan
Posted By: KongoLisolowaa: July 13, 2020 01: 44 No Comments
Waagii hore, Gabdheenna Madow / Afrikaanka ah way qarsadeen oo ka xishoodeen inay shaaca ka qaadaan khaniisnimadooda. Maanta, waxay isu muujinayaan iyagoon ka walwalayn indhaha dadka kale, iyo ...	Akhri wax dheeraad ah
Waajibka ah in la xasuusto: wakiilada 666, waa inaan tan iyo marwalba xasuusnaano "Dhamaan dadka caanka ah way hoos imaanayaan, waxay ka tirsan yihiin ama si toos ah ama si aan toos ahaynba wakiilada 666"
Posted By: KongoLisolowaa: July 2, 2020 10: 56 No Comments
Halkaas ayay joogaan, wakiilo gaaraya 666; Iyagu waa dhexdeenna; Way nala nool yihiin; Waxaan u haynnaa iyaga shirkad ahaan haddii aan garwaaqsanno iyo haddii kale; Had iyo jeer waxay muujiyaan calaamado, koodh ama ...	Akhri wax dheeraad ah
Jay-Z: oo ah walaalo dahab ah; Jay-Z waa bilaash bilaash ah; halkan waa fannaanka caanka ah Jay-Z (ninka Beyonce) ee ku nool Mareykanka Madow Masonic Lodge, isagu ma qarinaayo, wuxuu kasoo horjeedaa waxa dadka qaar u maleeyaan "Waxaan rajeyneynaa inaad hadda bilawdo inaad garato sida (Showbizz), uu yahay ku filan cudurka, waa kulul oo shar ah "
Posted By: KongoLisolowaa: July 2, 2020 06: 38 No Comments
Si kasta oo ay tahay, waxaan ka cabsanaynaa Rabbiga. Waa inaan cadeyno inuu isagu yahay oo kaliya waa inaan ka cabsanno nolosheena oo dhan oo aysan aheyn wax kale. Wuxuu na weydiisanayaa inaan ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug11 03: 06